ज्योती मगर प्रसंशा र आलोचना सहन सक्ने नारी (टिप्पणी र भिडियो सहित) – Himal FM 90.2 MHz
ज्योती मगर प्रसंशा र आलोचना सहन सक्ने नारी (टिप्पणी र भिडियो सहित)
बिचार – बिमर्श Author August 4, 2016
सृजना सर्जकमा भर पर्छ , मैले यो किन भनिरहेको छु भने,
बेलाबेलामा आलोचित भईरहने गायिका तथा मोडेल ज्योती मगर । उनकै सृजनामा आँफैले गाएको एउटा गीत (जुन तिजको रुपमा बजारमा आएको छ) ‘आफुले त यो तिजमा दर खादा नी रक्सि खाईन्छ ।’ यो गीतको बारेमा चिया गफ र सामाजिक सञ्जालहरुमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
ज्योतीको सृजना लक्षित एक फेसबुक स्टाटसमा लोक तथा दोेहारी गायक राजन ठकुरी लेख्छन्, ‘अरु सबैको दबाई हुन्छ, नकटोको दबाई नहुदो रैछ’ त्यस्तै, अर्का प्रतिभाशाली सर्जक सागर विरही लेख्छन्, ‘सेक्सलाई दालभात जस्तै मान्नेहरुले भोली गोप्य कुरा पनि गीत मार्फत बताउन के बेर ?’ लोक सर्जक केशर लामाको चिन्ता यस्तो छ, लोक गीतलाई व्यवस्थि तगर्न कस्तो नियम बन्ने होला ? भन्ने प्रश्नका माध्यमवाट लोकक्षेत्रका अगुवा नेताहरुलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । यसैगरी गीतकार दुर्गा पंगेनी फेसकुब टिप्पणी गर्छन्, ‘ज्योती राम्रो नराम्रो दुवै काम गर्न सक्ने र प्रशंसा र आलोचना दुवै सहन सक्ने हिम्ती नारी हुन्’
भनिन्छ, कलाकार समाजको ऐना हो । उस्ले समाजको वास्तविकता उतार्छ तर सकारात्मक रुपमा । एउटा कलाकारको सृजनामा नकारात्मक कुरालाई उठान गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गएिको हुनुपर्छ । होला, ज्योती मगरले तिजमा चल्ने भित्री विकृतीलाई समेटेर गीत बनाउन खोजेकी तर विषयलाई कस्तो रुपमा ढाल्ने भन्ने बुद्धि उनको नपुगेको पाईन्छ । विषयलाई साहित्यका नवरस मध्ये कुन रसलाई बढि मिलाउने, कुन रस नराख्दा समाजको दायरामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएको प्रष्ट पाईनछ । सोहि विषयमा गीत लेख्न चलेका कुनै गीतकारलाई दिईएको भए कस्तो गीत बन्थ्यो होला हामी कल्पना गर्न सक्छौ ।
उनकै स्वरमा आएको मौलिक तिज गीत यहि बर्ष सार्वजनिक भएको छ । एकनारायण भण्डारीको सृजनामा सितारा म्यूजिकवाट बजारमा आएको गीत ‘दुम्सी काँढे जुंगा’ सुन्दा ज्योती मगर प्रतिको मानसिकता बेग्लै तयार हुन्छ भने ‘यो तिजमा दर खादा नी रक्सि खाईन्छ’ यो गीत सुन्दा या हेर्दा उहि ज्योती प्रति भित्री मानसिकता फरक बनेर आउछ । यसरी तुलना गर्दा पनि भन्नी बाटो आफूले नै पानी रैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ज्योती आफैको कारणले उनका तस्विर तथा भिडियो कमेन्टमा अश्लिलता भएका कमेन्ट धेरै पाईन्छन् । तर उस्लाई त्यहि कमेन्ट ऊर्जाको विषय बनेको कतिपयको धारणा छ । त्यसकारण विषयगत सन्देश प्रवाहमा सर्जकको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
ज्योतीको बारेमा अर्को पाटो पनि छ । उनी दुवै किसिमको चर्चाको श्रेय लिन चाहन्छन् । उनको लोक कृतिहरुले त्यो देखाएको पनि छ । अलि बढि उनको उत्ताउलोपन देखिएपनि सभ्य लाग्ने सृजना गाउने र गुन्यूचोलीमा नाचेको पनि देखिन्छ । उनले एक रेडियोको अन्तर्वातामा भनेकी थिईन्, चर्चाको लागि पनि केहि उत्ताउली भएकी हूँ ।
ज्योती मगर तिमी नाम अनुसारको काम त गरिरहेकी छौ तर गलत बाटो अपनाएर । तिमिमा राम्रो बाटोबाट पनि चर्चा बटुल्ने क्षमता र संभावना छ । तर तिमि किन नेपाली समाजको घेरा तोड्दै अघि बढिरहेका छौ ? यो प्रश्न अनुत्तरित रुपमा ठडिरहेको छ ।